Tsy nahomby naneho ireo mpanao fihetsiketsehana ho mahery setra , nesorin’ny governemanta Thailandey ny fanjakana anaty hamehana · Global Voices teny Malagasy
Tsy nahomby naneho ireo mpanao fihetsiketsehana ho mahery setra , nesorin'ny governemanta Thailandey ny fanjakana anaty hamehana
Fandresena hafa ho an'ireo mpanao fihetsiketsehana mpomba ny demaokrasia
Voadika ny 06 Novambra 2020 4:44 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Português, русский, Español, English
Notontosaina ny fihetsiketsehana manohana ny demaokrasia tamin'ny 19 Oktobra tao amin'ny fihaonan-dàlana Kasetsart na dia teo aza ny fandraràna ny fivoriambe. Saripikan'i Prachatai. Nahazoana alàlana.
Navoakan'ny Prachatai, tranokalam-baovao tsy miankina iray any Thailandy ny endrika orizinaly tamin'ity lahatsoratra ity, ary novaina sy navoakan'ny Global Voices eto indray ho ampahany amin'ny fifanarahana fizarana votoaty.
Nesorin’ny praiminisitra Thailandey Prayut Chan-o-chan ny fanjakana anaty hamehana tamin'ny 22 Oktobra, araka ny filazan'ny Royal Gazette.
Nametraka fameperana tao Bangkok sy ny faritra manodidina ny fanjakana latsaka an-katerana, izay nanomboka ny 16 Oktobra. Nampidirin'izy ireo ny fandraràna ny fivoriam-bahoaka mihoatra ny olona dimy, ny fandraràna ny fitateram-baovao izay mandrahona ny fitoniam-bahoaka, ary ny fifehezana ny fitaterana sy ny fidirana amin'ireo tranobe sasany, araka ny baikon'ny praiminisitra.
Nofaritana ho “vonjitaitra ao anaty vonjitaitra” ny fanjakana latsaka an-katerena noho ny fampiasana efa misy ny didim-panjakana momba ny Vonjitaitra ho setrin'ny valanaretina coronavirus izay nitarin'ny governemanta fanimpitony hatramin'ny faran'ny volana novambra.
VAKIO BEBE KOKOA: Nahoana ny tanora no manao hetsi-panoherana ao Thailandy?[mg]
Nivory teny amin'ny araben'i Bangkok sy ireo faritany hafa isan'andro ireo mpanao fihetsiketsehana nanomboka ny 14 Oktobra, nitaky ny fialan'i Prayut, ny fanitsiana ny lalàm-panorenana ary ny fanavaozana ny fitondram-panjaka.
Nantenaina hitohy hatramin'ny volana novambra ny faran'ny didim-panjakana momba ny fanjakana latsaka an-katerena, ary fandresena ho an'ireo mpanao fihetsiketsehana mpanohana ny demaokrasia izay nihantsy ny fanambarana nandritra ny enina andro maninjitra ny fivadihana.
Nanao lahateny nangataka tamin'ireo vondrona rehetra i Prayut omaly mba hihemotra ary nilaza tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana mba hiantehitra amin'ny fizotra ara-parlemantera hahavitana ny raharaha. Tamin'ny 20 Oktobra, nankatoavin'ny Kabinetra ny fivorian'ny parlemanta manokana ho an'ny adihevitra 26 hatramin'ny 27 Oktobra.
Fikasana tsy nahomby tamin'ny fanaratsiana ireo mpanao fihetsiketsehana
Ny fihetsiketsehana manohitra ny fitondrana jadona tamin'ny 14 Oktobra no ampahany amin'ny valiny nandrasana taorian'ny nanemoran'ny parlemanta ny adihevitra fanitsiana ny lalàmpanorenana nandritra ny 30 andro tamin'ny 24 septambra, nandiso fanantenana ireo mpanao fihetsiketsehana teo anoloan'ny parlemanta tamin'io andro io.
Nanambara ny governemanta fa ampiharina ny fanjakana latsaka an-katerena mafy noho ireo fihetsiketsehana tsy manara-dalàna manitsakitsaka ny lalàna mifehy ny fivoriam-bahoaka, ary nanondro manokana ny tranga iray nisiana tanjozotran'ny fiaran'ny mpanjaka nandalo tamin'ny toeram-pihetsiketsehana.
Mpanao fihetsiketsehana telo, Ekkachai Hongkangwan, Boonkueanoon Paothong, ary Suranat Paenprasoet, no voampanga ho nanohintohina ny fahalalahan'ny Mpanjakavavy tamin'ny alàlan'ny fampiasana fahantany ny Andininy 110 amin'ny Fehezan-dalàna Heloka Bevava, izay ahitana sazy “an-tranomaizina mandra-pahafaty na fanagadrana enina ambin'ny folo ka hatramin'ny roa-polo taona.”
Na izany aza, tsy nahavita nanala baraka ireo mpanao fihetsiketsehana ny governemanta satria tsy nino ny fanehoan-kevitry ny besinimaro fa nikasa hanisy ratsy ny Mpanjakavavy ireo mpanao fihetsiketsehana. Raha ny tatitra nataon'ny haino aman-jery maro avy eny an-toerana, nanokatra lalana iray handalovan'ny tanjozotran'ny mpanjaka ny mpanao fihetsiketsehana.
Ho fanoherana ny fameperana ataon'ny governemanta, nivory indray ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny 16 Oktobra. Nanapa-kevitra ny governemanta fa hanaparitaka ireo mpanao fihetsiketsehana milamina amin'ny fampiasana tafondron-drano misy loko ary fangaro simika mampangidihidy. Tsy niherisetra mihitsy ireo mpanao hetsi-panoherana, izay nahitana mpianatra, ka nitarika fanakianana ny governemanta noho ny fepetra henjana tafahoatra, ary vao mainka nampihantsy mpanao fihetsiketsehana hidina an-dalambe.
Niezaka nifehy ny tantara indray ny governemanta tamin'ny fandidiana ny fanakatonana ireo fampahalalam-baovao izay nanome fitantarana betsaka momba ny fihetsiketsehana, tao anatin'izany ny Voice TV, Prachatai, ny Reporters, sy ny the Standard. Tsy nahomby ny fikasan'izy ireo satria nanohy ny fihetsiketsehana ny mpanao fihetsiketsehana ary nampiditra ny fitakiana ny fahalalahan-gazety koa ankehitriny. Nanome baiko ny hanesorana ny famerana ny gazety ny fitsarana tamin'ny 21 Oktobra.
Nandidy ny fanesorana ny fameperana ny fampahalalam-baovao ny fitsarana tamin'ny 21 Oktobra. Nahazoana alalana.
Tamin'ny fikasana farany nataon'izy ireo handrisihana herisetra, nivory tao amin'ny Oniversiten'i Ramkhamhaeng ireo mpanao fihetsiketsehana mpanohana ny mpanjaka ary nanao lobaka mavo mba hanoherana ireo mpanao fihetsiketsehana mpomba ny demokrasia. Nitranga ny fifandonana madinidinika teo amin'ny mpanao fihetsiketsehana roa tonta (mpomba ny mpanjaka sy ny mpanohana ny demokrasia), natombok'ireo lobaka mavo mpanohana ny mpanjaka.
Manamafy ny antontan-taratasy tafaporitsaka fa notohanan'ny governemanta ny fivorian'ny mpomba ny mpanjaka tamin'ny “fanasana” ny olona hanatevin-daharana izany. Nisy ireo mpilatsaka an-tsitrapo nihaika nanohitra ny baiko tamin'ny alàlan'ny fampisehoana ny marika rantsantanana telo no sady manao lobaka mavo.
Hatramin'izao, mbola tsy voavaly ny ankamaroan'ny fitakian'ireo mpanao fihetsiketsehana, ahitana ireo antoko politika lehibe manizingizina fa tsy hampiditra ny fanavaozana ny fitondrampanjaka amin'ny fandaharam-potoanany izy ireo, ary misambotra izay azony lazaina ho mpitarika fihetsiketsehana ny governemanta.